SanDisk ကမ်းလှမ်းချက်များ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk ကမ်းလှမ်းချက်များ
သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ, သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run တဲ့အခါမှာ, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသက်ဝင်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်. တပ်ဆင်ပြီးနောက်, သင် activation page ကို link တစ်ခုပေးထားပါလိမ့်မည်. ကျေးဇူးပြု, လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာနှင့် form မှာဖြည့်ပါ, RescuePRO®ဆော့ဗ်ဝဲကိုတစ်နှစ်အခမဲ့ရယူရန်အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်တွင်တွေ့ရသည့်နံပါတ်စဉ်ကိုထည့်သွင်းပါ. activation ဖို့ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ, သငျသညျမကြာသေးမီက SanDisk က USB drive ကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပါလျှင်, နှင့်သင့်ကူပွန် RescuePRO အဘို့ကို USB drive ကို RPRID ဖြင့်အစပြုတဲ့နံပါတ်စဉ်ရှိကြောင်းပူးတွဲ-0501, ကျေးဇူးပြု RescuePRO Deluxe သင့်ရဲ့ download ပြုလုပ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ, သင်တို့အပေါ်မှာ install လုပ်နေကြတယ်ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်မပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည် activation တောင်းဆိုနံပါတ်ကိုRescuePRO® Support သို့အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့ Activation Code ကိုပေးနိုင်ပါသည်.